Numeri 25 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
25 Israelfo beduu Sitim+ no, nnipa no fii ase ne Moab mmabaa bɔɔ aguaman.+ 2 Sɛ wɔrebɔ afɔre ama wɔn anyame+ a, mmea no frɛfrɛ wɔn kɔ ase, enti wodidii na wɔsom wɔn anyame no.+ 3 Enti Israel de ne ho kɔbɔɔ Baal-Peor,+ na Yehowa bo fuw Israel denneennen.+ 4 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Fa ɔman no mu atitiriw nyinaa bɛsensɛn wɔn Yehowa anim+ wɔ owia so, na Yehowa abufuw mfi Israel so.” 5 Enti Mose ka kyerɛɛ Israel atemmufo no sɛ:+ “Mo mu biara nkunkum+ ne mmarima a wɔde wɔn ho kɔbɔɔ Baal-Peor no.” 6 Saa bere no ara mu no, Israelni barima+ bi kɔfaa Midianni bea+ bi baa ne nuanom mu, Mose ne Israel asafo no nyinaa anim, bere a wogyinagyina ahyiae ntamadan no ano resu no. 7 Bere a ɔsɔfo Aaron ba Eleasar ba Finehas+ huu nea ɛrekɔ so no, ɔyɛɛ ntɛm fii asafo no mu kɔfaa ne peaw. 8 Odii Israelni barima no akyi kɔɔ ntamadan no mu, na ɔde peaw no wɔɔ Israelni no ne ɔbea no nyinaa ma epuee ɔbea no ayaase. Afei ɔhaw a ɛbaa Israelfo so no to twae.+ 9 Wɔn a ɔhaw no nti wowuwui no dodow yɛ mpem aduonu anan.+ 10 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 11 “Ɔsɔfo Aaron ba Eleasar ba Finehas+ asianka m’abufuw+ afi Israelfo no so, efisɛ ɔtwee ninkunu maa me wɔ wɔn mu.+ Eyi amma m’ankasa mantwe ninkunu+ antɔre Israelfo no ase. 12 Enti ka kyerɛ no sɛ: ‘Me ne no bɛyɛ asomdwoe apam. 13 Na ɛbɛyɛ asɔfodi apam daa ama ɔne ne nkyirimma nyinaa,+ efisɛ ɔtwee ninkunu maa ne Nyankopɔn+ de pata maa Israelfo no.’”+ 14 Israelni barima a wokum ɔne Midianni bea no din de Simri, Salu a ɔyɛ panyin+ wɔ Simeon abusuakuw mu no ba. 15 Na Midianni bea a wokum no no din de Kosbi, Sur+ a ɔyɛ panyin wɔ Midianfo+ mmusua no biako mu no ba. 16 Akyiri yi, Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 17 “Monhaw Midianfo no na munkunkum wɔn,+ 18 efisɛ wɔde wɔn nnaadaa+ ne anifere ma moyɛɛ bɔne wɔ Peor.+ Wɔnam Midian abusuapanyin bi babea Kosbi+ so maa moyɛɛ bɔne. Wɔn nuabea yi na wokum+ no da a ɔhaw baa Peor no.”+